China Ratten Plastic oche akpụzi factory na-emepụta | HEYA
Ratten Plastic Chair akpụzi bụ nke oche akpụzi n'okpuru Ratten Plastic Chair akpụzi. Dị ka dị iche iche ngwaahịa ekwekọghị, The oche akpụzi nwere ike kere n'ime omenala style na ahaziri style, dị ka stackable plastic oche Ebu, mpịachi oche injection ebu emeputa, osimiri oche ebu, wdg
Taizhou Heya akpụzi Co., Ltd bụ ngwá ọrụ na-anwụ anwụ factory maka oche akpụzi dị ka dị iche iche ndị ahịa chọrọ.
Anyị na-anabata OEM & awa a na-enye dabere na ihe atụ, ma ọ bụ eserese akụkụ, ma ọ bụ foto nlele.
Ihe e kwuru ga-eju gị afọ ma ọ bụrụ na ịkpụzi ebu na ọnụ ahịa ebu.
Anyị na-atụ anya ka gị na gị nwee mmekọrịta siri ike.
Aha ngwaahịa Ratten Plastic oche Mould
A: Heya akpụzi bụ plastic ebu factory.
Nke gara aga: Stackable Plastic oche Ebu
Osote: Plastic oche akpụzi